Oge oge a
1996: John Smedley na Sony Interactive Studios America mepụtara isi echiche maka EverQuest.
1999: EverQuest malitere na ngwa ngwa wee nwee ihe ịga nke ọma karịa ka a tụrụ anya ya, na-esetịpụ ụkpụrụ dị elu maka ọdịbendị na-emepe emepe nke ọtụtụ egwuregwu na-egwu egwuregwu n'ịntanetị.
2002: Mgbasa nke anọ nke EverQuest, “Planes of Power,” kwusiri okwu ike banyere okpukpe a kpụrụ akpụ, na-enye ohere ka accessgbọelu nke Oge Gafere, ma ọ bụ nanị maka avatar ndị meriri ọtụtụ chi ndị mbụ.
2004: EverQuest nke Abụọ ulo oru online.
2006: Mgbe oge nke ije ije nke ọma, chi ahụ laghachiri Norrath na nke izizi EverQuest.
2009: Otu mbipụta pụrụ iche nke akwụkwọ akụkọ ahụ Egwuregwu Egwuregwu raara nye EverQuest na afọ nke iri ya.
2015: EverQuest na EverQuest nke Abụọ bufere Sony ka Daybreak Game Company.
2016: Atụmatụ ịhapụ ụdị nke atọ, EverQuest Ọzọ, gbahapụrụ.
2018: Mgbasa nke iri na ise nke EverQuest nke Abụọ, "Ọgba aghara na-agbadata," laghachiri n'okwu sitere n'okike nke "Planes of Power" na chọrọ avatars iji weghachi mpaghara ndị na-anọchi anya ụwa, ikuku, ọkụ na mmiri.
N'ihe ize ndụ nke obere ikwubiga okwu ókè, anyị nwere ike ịtụgharị asụsụ EverQuest (EQ) dika ochicho mmadu nke n’enwe ngwụcha maka ntụgharị, site na okpukperechi ma ọ bụ na sayensị, nke a anaghị agwụ agwụ n’ihi na ọ naghị aga nke ọma. Ẹkedori ke 1999, ọ na-ebe ghọtara dị ka ọkọlọtọ-setter maka ọtụtụ mmadụ online egwuregwu na-egwu egwuregwu, ọ bụghị naanị na ya 3D ndịna-emeputa na nnukwu mebere ala, kamakwa na ya mgbagwoju socio-omenala Ọdịdị na ya mgbe nile mgbasa dị ka ọhụrụ n'ókèala na agbakwunyere akụkọ kemgbe ọtụtụ afọ. Na 2004, a dị iche iche mmegharị nke otu echiche ulo oru, EverQuest nke Abụọ (EQ-II), mana ụdị nke mbụ gara n'ihu na-ewu ewu ma nata mmelite. Ọnọdụ a bụ ụwa aha ya bụ Norrath, na ọnwa ya, ya mere enwere akụkọ sayensị, mana isi okwu metụtara chi, ike karịrị ike, yana mmekọrịta ha na avatars nke ndị egwuregwu ahụ.
Wikipedia na-egosi na EverQuest oru ngo malitere na 1996 mgbe John Smedley, onye isi oru Sony Interactive Studios America, gbara ume site na mwepụta 1995 nke Meridian 59, ọsụ ụzọ ọtụtụ egwuregwu n'ịntanetị bụ nke dabere na akụkọ ifo. Sony bụ nnukwu ụlọ ọrụ mba ụwa nke sitere na Japan wee bido usoro vidiyo vidiyo PlayStation na 1994. Ezubere iji na-agba ọsọ na kọmputa nke Windows karịa na PlayStation, na ijikọ na sava Internetntanetị nke ga-ejikọta data site na ọtụtụ puku ndị egwuregwu, EverQuest ezubere imepe ahịa ọhụrụ maka Sony. Wikipedia na-akọ, sị:
Iji mepụta atụmatụ ahụ, Smedley goro ndị mmemme Brad McQuaid na Steve Clover, ndị bịakwutere Smedley anya site na ọrụ ha na RPG ọkpụkpọ Onye agha. N'oge na-adịghị anya McQuaid bilitere n'ọkwá ka ọ bụrụ onye isi ọrụ maka ndị EverQuest aha ma pụta n'oge mmepe nke EverQuest dị ka onye a ma ama n'etiti ndị ofufe obodo site na avatar egwuregwu ya, Aradune. Ndị isi ndị ọzọ so n'òtù mmepe ahụ gụnyere Bill Trost, onye kere akụkọ ihe mere eme, akụkọ na isi ndị Norrath (gụnyere EverQuest protagonist Firiona Vie), Geoffrey 'GZ' Zatkin, onye na-emejuputa atumatu usoro, na artist Milo D. Cooper, onye mere ihe odide mbụ na egwuregwu ahụ.
Ka ọ na-erule afọ 2004, eserese eserese ahụ mere ka ọ dị ugbu a, ma kọmputa na Internetntanetị nwere ike ijikwa nyefe ozi ngwa ngwa ma dịkwa oke mkpa, yabụ ebuputara mbipute dị elu, EverQuest nke Abụọ, na-enweghị agbanyeghị nke mbụ. Nke a choro ka o doo anya n'ime akụkọ ifo, tinye EQ na EQ-II n'akụkụ dị iche iche n'akụkọ ihe mere eme nke Norrath ma kọwaa etu ụwa a nwere ike isi gbanwee nke ukwuu. Otu ọmụmụ banyere okpukpe n'egwuregwu kọmputa na-akọ, sị:
Egwuregwu ndị a bụ ụzọ abụọ dị mkpa n'ịzụlite ụdị a na nkwado nke ọtụtụ ihe ọdịnala ọdịnala ọdịnala, dịka elves, orcs, goblins, na ogres. O doro anya na Norrath abụghị ụwa nke anyị, kama ọ na-egosipụta isi echiche sitere na akụkọ ihe mere eme n'ezie. Mgbe alaeze Rome dara, Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ọdịda anyanwụ ọkara nke ókèala ya, na-atọ ntọala maka obodo ochie nke soro ọchịchịrị Ọchịchịrị ọtụtụ narị afọ mgbe nke ahụ gasịrị. Ọchịchịrị oge mekwara n'etiti EverQuest na EverQuest nke Abụọ, mgbe chi gbahapụrụ Norrath na akụkụ nke ọdịdị ala ya gbajiri (Bainbridge 2013: 292).
Na 2015, Sony hapụkwara EverQuest, na-erere nkewa ya maka egwuregwu ịntanetị nke dabeere na PC, nke ghọrọ Daybreak Game Company, ma na-ezube ịmepụta ụdị nke atọ a na-akpọ EverQuest Ọzọ N'oge na-adịghị anya, a gbahapụrụ ha. Agbanyeghị, ma EQ ma EQ-II nọgidesiri ike na-aga n'ihu ma na-enweta nkwalite site n'oge ruo n'oge. N'iburu na ọdịbendị ọdịbendị na ọdịbendị ha nwere na mgbasa ozi n'ịntanetị ludic, ọtụtụ ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze (Bainbridge 2010; Huh na Williams 2010; Williams, Kennedy na Moore 2011; Burt 2012) mụọ ha.
Norrath bụ nnukwu ala na ọdịbendị, yana ọtụtụ chi dị iche iche metụtara n'ụzọ dị iche iche agbụrụ na klaasị nke avatar. Na mbu, avatar sitere na ọmụmụ ya rue otu n'ime agbụrụ iri na abụọ na otu nke klas iri na anọ, mana afọ iri abụọ gachara nke mbụ EverQuest nwere iri na isii n'ime ha abụọ. Ya mere, nkà mmụta okpukpe bụ usoro dị mgbagwoju anya, n'adịghị ka nkwenye nke otu Chineke, na-ejikọ ihe okike na nke karịrị nke mmadụ n'ọtụtụ ụzọ. Nkwalite dị mma bụ ịtụle ụdị ndị ụkọchukwu atọ, dịka akọwara na akụkụ nke EQ ebe onye ọkpụkpọ na-emepụta avatar ọhụrụ:
Ndị ụkọchukwu na-arara ndụ ha nye chi nke Norrath, na-enweta ikike anwansi iji gbanwere okwukwe na ọrụ ha. ” "Ndị Druids bụ ndị na-eso ụzọ nke anụ ọhịa, na-agbaso nkuzi nke chi Norrathian nke okike." “Ndị Shamans na-eje ozi dị ka ndị ụkọchukwu nke agbụrụ agbụrụ nke Norrath, na-enwe ike ịdọrọ n'ike nke ndị mmụọ ma lekwasị ya anya maka ebumnuche ha.
Rịba ama na ọ dịghị ihe ọ bụla a na-ekwu na ndị ụkọchukwu ga-abụ ndị aka ha dị elu, mana ọrụ ha kachasị na otu avatars bụ ịgwọ ndị otu egwuregwu nke klaasị dị iche iche, n'oge na ozugbo agha busoro ndị iro.
Aremụ mmadụ bụ otu n'ime agbụrụ iri na isii, ha nwere ike ịbụ ndị ụkọchukwu ma ọ bụ druids, mana ọ bụghị shamans n'ihi na ụdị ụkọchukwu ahụ bụ naanị agbụrụ agbụrụ oge ochie. Ndị ụkọchukwu nke mmadụ nwere otu okpukperechi isii, nke ọ bụla na-efe chi ọzọ. A na-ahazi chi dị iche iche na agbụrụ dị n'ụdị atọ n'ime otu, kpọọ nke ọma, nke na-anọpụ iche ma ọ bụ nke ọjọọ. Agbanyeghị, nkọwaa ndị a na-akọwa ụdị mma ọ bụghị omume ọma, ebe ọ bụ na ezigbo avata dị ka ndị ajọ omume iji gbuo anụmanụ na-emeghị ihe ọjọọ ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị egwuregwu iji nweta akụ ha. Enwere ike ịchọta ozi gbasara chi ọ bụla na wikis nọọrọ onwe ya na EQ (EverQuest webụsaịtị nd), EQ-II (eq2.zam.com), na oke olu nke abụọ (EverQuest Lore webụsaịtị nd). Onye ụkọchukwu mmadụ na EQ nwere nhọrọ nke chi atọ dị mma jikọrọ: Ezigbo: Erolissi Marr (Queen of Love), Mithaniel Marr (The Lightbearer or The Truthbringer) ma ọ bụ Rodcet Nife (Prime Filer). Otu chi na-anọpụ iche dịkwa: Karana (The Rainkeeper). Chi ojoo abuo nke onye nchu aja nke mmadu nwere ike ife bu Bertoxxulous (The Plaguebringer) ma obu Innoruuk (Onye isi nke Okpukpo). Ederede mbụ sitere na isiokwu na-akọwa atọ nke chi ndị a na EQ wiki na-akọwapụta usoro mmụta okpukpe dị mgbagwoju anya:
Erollisi Marr na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya na ịhụnanya na-emeri ihe niile. Ya, ya na nwoke ejima ya nwoke bu Mithaniel kere ndi mba ozo n’oge The Age of Monuments. Ekwenyere na mmalite nke ndị Barbarian na ụmụ mmadụ sitere na mmetụ nke Erollisi. Ọ bụ ezie na ịhụnanya bụ ihe mara mma, ndị na-efe Erollisi anaghị enwe obi ike ikwenye na Norrath na-enweghị agha ga-ekwe omume. Ha dị njikere ịlụ agha n'onwe ha ma ọ bụrụ na ọ pụtara ịgbachitere ụkpụrụ, ndị mmadụ, na ebe ha hụrụ n'anya.
Ndị na-eso ụzọ Karana tinye okwukwe ha niile na ike inye ndụ na mbibi nke oke ikuku niile. Ndị na-eso ụzọ Karana bụ ndị ọrụ ugbo, Druids na Rangers. Ọ bụ ezie na ha na-asọpụrụ ike nke Oké Ifufe Onyenwe anyị, Ha na-enyekarị ndị njem ebe obibi, n'ihi na ha bụ ndị ezigbo mmadụ nwere mmasị na ịkwụwa aka ọtọ. Dị nnọọ ka ndị na-eso ụzọ Quellious, ọtụtụ ndị na-efe Karana na-ebi ndụ nkwagharị. A na-akpọ ala dị larịị nke ọdịda anyanwụ Antonica aha Karana n'ihi mmiri ozuzo na-emekarị na mpaghara nke na-enye ezigbo ugbo maka Qeynos. Karana bụ otu n'ime chi abụọ e kere eke, na nke kacha anabata. Dị ka ndị dị otú a, mmadụ niile na Halfling Druids na Rangers na-efe ya ofufe, yana ọtụtụ n'ime Half Elves.
Ndị na-eso Bertoxxulous kwenyere na naanị eziokwu dị na Norrath bụ na ihe niile na-anwụ. Ha na-ele ire ere nke anụ ahụ anya dị ka ihe kachasị mma. Purdị dị ọcha nke egbugbere ọnụ ọhụrụ, nke na-acha odo odo nke na-acha odo odo nke pustule jupụtara, bụ ole na ole n’ime ihe ndị na-eso ụzọ ya na-alishụrị. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya na-agbaso ọchịchịrị nke Necromancy, n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla dị ha mma karịa ka ndị gbara ha gburugburu gbara ha gburugburu, n'agbanyeghị ndụ, na-anọgide na-ere ure ma na-ere ere. Ewerela nke a ịsị na ndị na-eso ụzọ ya na-egbu onwe ha ma ọ bụ chọọ ọnwụ ngwa ngwa. N'aka nke ozo, ha choro ibi ndu ogologo, nke na-egbu mgbu, na-agbasa ochichiri ha na oria n'ofe nile nke Norrath. Ọtụtụ chi ndị ọzọ, ọbụnadị ndị ajọ omume, na-ele ya anya dị ka ihe arụ, mana Rodcet Nife bụ onye iro ya kacha kpọ asị.
Nkọwa nke Erollisi Marr na-akọ na nwanne ya nwoke ejima, Mithaniel Marr, bụ chi hà nhata. Nkọwa nke Karana na-atụ aro ụfọdụ myirịta na ezi chi Quellious, onye onye EQ-II wiki kọwara etu a:
Chi nwanyị a dị udo nwere njikọ chiri anya na Rodcet Nife na Erollisi Marr, na onye iro nke Rallos Zek na Innoruuk. Iwu ojoo na-achịkwa ụgbọ elu nke obi iru ala. Ndị na-eso Quellious the Tranquil na-achọ udo. Ha abụghị ndị agha udo siri ike, agbanyeghị, ha ga-alụ ọgụ iji chebe onwe ha na ndị ha hụrụ n'anya. Udo ha na-achọ bụ nke dị n’ime. Ha chọrọ ịmara ihe niile banyere onwe ha na ihe gbara ha gburugburu.
EQ-II wiki kọwara ihe kpatara chi ụmụaka udo, Quellious ji asọ ajọ mmụọ Rallos Zek asị: “Ndị na-eso ụzọ Rallos Zek, Onye isi agha, kwenyere na nlanarị nke ndị siri ike na ọnwụ nye ndị na-adịghị ike. Obi nke ezi onye na-eso Zek na-achọrọ ike, ume, ma karịa ihe niile, mmeri. ” Yabụ, chi dị ka ụdị mmadụ avatar nwere ike ịnabata. Ha nwekwara ihe metụtara ala ha; iji maa atụ, nkọwa Karana na-atụ aka etu Oké Ifufe a si enyere ndị ọrụ ugbo nke Antonica aka ịkwado isi obodo ha, Qeynos.
A na-agbakwunye nhọrọ chi na agbụrụ na klaasị nke avatar, anyị na-ahụkwa na Halflings na Half Elves nwekwara ike ife Karana. Halflings, na-agbaso ọdịnala nke egwuregwu mbụ nke tebụl Dungeons na Dragons (Gygax 1979), bụ n'ezie JRR Tolkien's Hobbits, degharịrị aha iji zere nsogbu nwebisiinka ma ọ bụ ụghalaahịa, na Half Elves dị ka ngwakọ nke ụmụ mmadụ na Elves dị ọcha. Nkọwa nke EQ wiki banyere Karana na-ekwu maka chi dị iche iche abụọ, nke ọzọ bụ Tunare (The Mother of All), onye kere Elves. Rumụ mmadụ druids nwere ike ịgbaso ma Karana ma ọ bụ Tunare, ha abụọ na-anọpụ iche. Na echiche di iche nke okwu a, enwere chi ozo di iche iche, na-egosi ihe anọ nke okike: Karana (ikuku), Brell Serilis (ụwa), Prexus (mmiri), na Solusek Ro (ọkụ). Onye ọ bụla nke agbụrụ Dwarf bụ onye ụkọchukwu ga-abụ onye ụkọchukwu clericụrụ iyi Brell Serilis (Duke nke dị n'okpuru, Onye isi ala ụkwụ), n'ihi na dịka ọdịnala sara mbara gụnyere Tolkien na Ring operas nke Richard Warner, Dwarves bụ ndị injinia na-egwu ala n'okpuru ọla, ma n'ime EverQuest ọ bụ Brell Serilis, ndị na-achị mpaghara ahụ, kere ha. Ndị ụkọchukwu na agba ọsọ Erudite na-eso Prexus (The Oceanlord).
N'etiti agbụrụ ochie, o doro anya na ndị Barba enwetaghị enyemaka nke Erollisi Marr ka ha wee ghọọ ụmụ mmadụ mepere anya, ndị shaman ha na-efekwa ofufe nke ha, The Tribunal (The Six Hammers). N'aka nke ọzọ, Vah Shir shamans bụ ndị na-amaghị ama, mana nke a bụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi na ha abụghị ndị bi na Norrath, kama ha bụ ihe okike ndị amụrụ na ọnwa Norrath, Luclin. Troll shamans nwere nhọrọ abụọ, Innoruuk ma ọ bụ Cazic-Thule (Onye na-enweghị ihu, Onyenwe Egwu). Shamans nke agbụrụ Iksar reptilian jikọrọ naanị Cazic-Thule bụ onye kere ha. Ndị Shaman nke agbụrụ abụọ ọzọ na-efekwa otu chi, Rallos Zek n'etiti Ogres na Mithaniel Marr n'etiti Frogloks.
Otu echiche ziri ezi nke monotheism nke ụwa bụ na "Chineke dị ukwuu na Chineke dị mma," mana ịgbachitere ụwa na ikpere arụsị na-eme ka e nwewe obi abụọ banyere echiche ahụ. Ọ bụrụ na chi dị na ọtụtụ, mgbe ahụ onye ọ bụla n'ime ha nwere ọchịchọ ọ bụla, a ga-eje ozi n'ụzọ ga-emeju ọchịchọ ndị ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị enwe ọdịmma kasịnụ nke mmadụ. Otu ụzọ ndị nyocha nwere ike isi mụọ okpukperechi nke ntanetị bụ site na ịkọ akụkọ ọdịnala, na -emepụta avatar nke na-anọchite anya otu okwu metụtara isiokwu nke nyocha ahụ, na-agbaso usoro psychodrama nke Jacob Moreno (1944) mepụtara, onye bụkwa onye ọsụ ụzọ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya netwọk nnyocha. Otu nnyocha dị otú ahụ emere n'ime EQ-II mepụtara avatar aha ya bụ Cleora, na-akpọlite ​​nwatakịrị nwanyị nwụrụ mgbe ọ dị otu na 1870 ma chee na ọ ga-abụ na ọ na-ewe iwe na Chineke zuru ndụ ya (Bainbridge 2018). Ọ bụ nwa nwanyị nke onye ọkà mmụta sayensị na-elekọta mmadụ nke gụrụ akwụkwọ na mba ndị ọzọ Protestant na 1879-1882 wee dee akwụkwọ ọgụgụ Cleora biri ndụ iji bụrụ onye ozi ala ọzọ na ala ọzọ, wee nye ndụ ya n'afọ ofufo na okwukwe ndị Kraịst (Bainbridge 1883). Na EQ-II, Cleora bụ onye na-enweghị obi abụọ, na-ewe iwe maka otu chi si dị njọ, bụ onye nọgidere na-amaghị ama ruo mgbe ọ gafere ogo iri atọ, chọrọ ịmụta etu esi arụpụta ihe bara uru, wee chọpụta na imepụta ihe ga-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ nwere ike nweta ihu ọma Brell Serilis. Serilis bụ otu n'ime chi ndị na-anọchite anya ihe okike, na nke ya ụwa, onye na-achị n'okpuru ụkwụ ebe enwere ike igwu ọla. Dị ka ihe anụ ahụ n'onwe ha (ụwa, ikuku, ọkụ, mmiri) chi ndị bụ isi adịghị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ, mana ha anaghị etinye aka na omume.
Iji nweta ihu ọma chi ọ bụla na EQ-II, avatar ga-emerịrị usoro nchụso siri ike, nke mbụ maka Brell Serilis ga-abanye ụlọ nyocha anọ dị egwu dị n'okpuru ala, na-achịkọta ihe dị iche iche dị nsọ na nke ọ bụla, nke a ga-agbakọta iji mee Ntọala nke Nsọpụrụ. Avatars ga-eruworị ogo iri abụọ tupu ha enwee ike mezue ozi a, ma eleghị anya ha ga-achọ otu ndị avatar enyi na enyi iji nyere ha aka. Na ọkwa iri atọ, Cleora nwere ike mezue ya n'onwe ya, mana ọ chọtara ozi ọzọ na-esiri ike karị:
Ọchịchọ nke abụọ maka Brell, 'Prospector of Lost Faith,' bu ụzọ chọọ Cleora ka ọ kpọsaa nloghachi Brell na ndị otu asaa nke ndị iro gafee Ugwu Butcherblock, nke dị mfe na mbido, nyere Cleora ikike ibanye nke ọma n'ihe mgbochi. Mana mgbe ahụ achọrọ ka ọ mezue usoro nke usoro siri ike iji weghachite Chalice of Hope site n'ime ime obodo Orc, Crushbone Keep. Echere, enwere ike imezu nke a na ọkwa iri atọ na ise, mana dị ka onye nyocha naanị Cleora dara na ọkwa 45, na-adaba onye mbụ n'ime enweghị olileanya, wee bụrụ ihe jọgburu onwe ya na oke Brell. Mgbe o nwetachara ihe mmụta sitere n'aka ndị mọnk okpukpe nke Ashen Order, n'ọkwa iri isii na ise ọ laghachiri na Crushbone Keep, weghachite Chalice of Hope, wee nata dị ka ihe nrite ya bụ ọla nke gaara aba uru na avatar na ọkwa 35 mana abaghị uru n'anya ya na ọkwa 65. Mgbe ọ gara na New Halas, ọ hapụrụ ọla ahụ laghachi Brell na ebe ịchụàjà ya, ma tụgharịa uche ma ọ ga-ekpe ekpere ka o nye ya ihe na nkwụghachi. N’iche n’echiche na ọ mesoro ya omume ọjọọ site n’igwa ajụjụ ndị siri ike nye ya, o kwubiri na ịkpọrọ ya isi ga-abụ mmechuihu na-erughi ya ”(Bainbridge 2013: 61-62).
Maka otutu avata, chi ndia abughi nani na ihe omuma nke avatar, kamakwa na ndu ha kwa ubochi na ahia ahia ma obu mmeputa. Avata nwere ike inwe ebe obibi, karịchaa ụlọ n'otu ebe, ebe a na-edebe arịa ụlọ, ọrụ aka, na arịa okpukpe. N'inye ọkwa dị mma na nka imepụta, avatar dị na EQ-II nwere ike wuoro otu n'ime chi ebe ịchụàjà, debe ya n'ụlọ, nye enyi gị, ma ọ bụ ree ya site na usoro usuu. A pụkwara ịzụta ebe ịchụàjà n’ebe ndị na-abụghị ndị ọkpụkpọ a kpọrọ “ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke chi” nọ. N'ebe a, anyị na-ahụ Cleora na-eji ebe ịchụàjà iji Brell Serilis, n'ụzọ dị mfe amata site na igwu ala ngwaọrụ nke gosipụtara na ya. Ebe ịchụàjà bụ ngwaọrụ dị mgbagwoju anya ebe avatar na-echekwa "ihu ọma" na chi site na ịchụ àjà ma ọ bụ site na ịmecha "nchọta nchụso ofufe" nke bụ ọrụ ndị ọzọ n'ụwa niile metụtara omume nke otu chi. Enwere ike iji amara a nweta akụ bara uru, nke a ga-eji tụnyere anwansi anwansi. Dịka ọmụmaatụ, avatar dị na foto a [Foto dị n'aka nri] nwere isi ihe 8,890 ugbu a ma na-eche echiche itinye ego 1,125 na Rift si n'okpuru, okwu anwansị nke enwere ike iji naanị otu awa. Interface maka iji ebe ịchụàjà na-akọwa ya:
'Naanị ndị nwụrụ anwụ anaghị eji ụkwụ ha egwu egwu. Ezigbo enyi ụwa ọ bụla maara na mpaghara Brell nwere ike ịme ka ị maa jijiji. ' Mmetụta: Thtufu azụ azụ; Na-emetụta mmebi 2164-5050 na ebumnuche na Mpaghara Mmetụta; Na-emetụta mmebi 340-794 na ebumnuche na Mpaghara Mmetụta ọ bụla 3 sekọnd; Kwesịrị imecha estchọ 'Iwulite Ntọala nke Nsọpụrụ'
Nke ahụ bụ ịsị, itinye chi ọma na ikike anwansi a ga-eme ka avatar nwee ike ime ka ala ọma jijiji na-eme otu oge n’otu awa.
Enwere ike ịchọta ozi gbasara mmekọrịta dị n'etiti chi dị iche iche na ụmụazụ ha na ọpụrụiche EverQuest Lore wiki (Ebe nrụọrụ weebụ EverQuest Lore nd), na-akọwakarị otu ofufe nke otu chi nwere ike isi bulie ike avatar ọbụlagodi na enweghị ebe ịchụàjà. Ọmụmaatụ:
Chi nke anyanwụ na ire ọkụ, Solusek Ro na-achị Plane nke Sun, ọ bụkwa nwa nwoke Fennin Ro, chi mbụ nke ọkụ… Solusek Ro bụ arụmụka a kacha efe n'etiti chi na ndị dibịa afa na ndị ọzọ na-ekwu okwu arcane, nwere nnukwu aha ọnụ ọgụgụ nke ndị na-efe ofufe site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agbụrụ niile na-eji anwansi arcane, na ọbụna ole na ole site na agbụrụ ndị na-adịghị, omenala. Ozizi ya, dị ka Onye Isi Na-ere Ọkụ n'onwe ya, dị egwu ma dabere na ike. A kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ịkwanyere ire ọkụ ùgwù dị ka onye na-enye ma na-ewere ndụ, na anwansi a na-ahụ anya bụ ihe dị mkpa nke usoro okike, yana ịnweta ikike onwe onye dị oke mkpa (yana anwansi na ihe ọmụma bụ ụzọ kachasị mma iji nweta ike a).
Ọ bụ ezie na avatars enweghị ike ije ozi dị ka ndị ụkọchukwu, druids, ma ọ bụ ndị dibia maka Solusek Ro, ha nwere ike ịbụ ndị amamịghe ya, yana o nwere ụlọ nsọ na Ugwu Lavastorm nke EQ ebe enwere ike ịnakwere ọtụtụ nchọta site na ndị na-abụghị ndị egwuregwu nọ n'ebe ahụ. Iji zigara ụfọdụ n'ime ihe kacha mma, avatar ga-ebu ụzọ mezue ndị ọzọ, na-enweta ihe a na-akpọkarị "òtù" kamakwa "aha otu." Otu aghụghọ ndị egwuregwu na-achọpụta n'oge na-adịghị anya bụ na otu agwa dị egwu aha ya bụ Tazgar the Efreeti na-agagharị n'ụlọ nsọ, ma na-eto ya ga-ehichapụ isi ihe niile akwụgoro ụgwọ. Mmadu nwere ike ikwenye na Tazgar the Efreeti bu ekwensu nke ndi Alakụba, mana nke ahu adighi anya na EQ.
Ozi nke izizi nke na-ewekarị awa anọ na-akpata ndị ọrụ nke Mgbanwe Flux, nke bụ ngwa bara uru maka ndị amoosu. Iji nweta ndị ọrụ ahụ, avatar kwesịrị ịgwa Gardern okwu, onye na-abụghị onye ọkpụkpọ nke na-eguzo na mbara ihu na ụlọ nsọ ahụ, wee gaa ọtụtụ ebe iji nweta ihe anọ ọ nwere ike ijikọ iji mepụta ndị ọrụ ahụ: Obi Ọkụ (site na Inferno Goblin Ọkachamara na anya Solusek); Obi ntu oyi (site na Goblin Wizard in Permafrost); Mkpanaka nke Ọkpụkpụ (site na ọkpụkpụ ọkpụkpụ n’akụkụ Ọdọ Mmiri Rathetear); Darkwood Staff (nke enwetara site na Romar Sunto site na nchọta n'akụkụ). Foto dị ebe a [Foto dị n'aka nri] na-egosi avatar na-eleta Templelọ Nsọ nke Solusek Ro n'ọnụ ụzọ ya, nke ndị ọrụ ụlọ nsọ abụọ na-abụghị ndị ọkpụkpọ gbara ya gburugburu, ha atọ na-ejide mkpịsị anwansi.
N'iburu ọdịiche dị na nkà mmụta okpukpe na agbụrụ nke Norrath, ọtụtụ òtù na-asọmpi yana ụkpụrụ nhazi dị. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọtụtụ mgbanwe gbanwere na nkewa ọrụ n'etiti ndị avata, ọkachasị idegharị klaasị, site na iri na abụọ ruo iri na isii na EQ wee ruo iri abụọ na ise na EQ-II. Akụkụ nke mmụba ahụ bụ nkewa nke klas ọ bụla na klas abụọ, dị ka akọwapụtara na weebụsaịtị EQ-II (weebụsaịtị EverQuest2 nd):
"Ndị Tempili na-eji ike Chukwu emezi ndị merụrụ ahụ ma gwọọ ahụhụ nke ndị a na-emekpa ahụ.
“N’ịbụ onye nwere ike ije ozi dị ka isi nkuku nke òtù ọ bụla na-achọ ịbịa, Onye Nnyocha ahụ nwere ike ịgwọ ọnyá ma kpochapụ ọrịa ndị dịka ọrịa na nsị.”
“N’ikpuchi ikike ndị sitere n’okike, oke iwe nwekwara oke ike ma nchekwa ma mbibi.”
"Ndị Wardens na-arịọ ka ike ha druidic mezie ọnya na mkpochapụ ọrịa na nsi site n'aka ndị ha na ha jikọrọ aka."
"The Mystic bụ shaman nke nchekwa na nghọta nke mmụọ."
"Onye ahụ na-emerụ emerụ bụ shaman nke ire ure na ịgba ohu nke mmụọ."
N'ime klaasị na agbụrụ ọ bụla, avatar nwere ike ikpebi etu esi emeso ọgụ megide avatar nke ndị otu na-asọ mpi, ma ọ bụrụdị na ọ dị ma ọlị. A na-akpọ ime ihe ike n'etiti ndị egwuregwu PvP ma ọ bụ Player-versus-Player, onye isi ọzọ bụ PvE ma ọ bụ Player-versus-Environment nke ndị avata na-arụ ọrụ na-adịghị eme ihe ike ma ọ bụ na-achụ nta anụmanụ na ndị na-abụghị ndị ọkpụkpọ. Dị ka ọ dị, avatars na-echebe site na avatar nke ọkpụkpọ ọzọ, mana ọ ga-ekwe omume ịgbanwe na ọnọdụ PvP, na-adị mfe mbuso agha kamakwa inwe ike ịwakpo avatar ndị ọzọ nọ na ọnọdụ PvP. N'ọtụtụ ebe na EQ, a na-anọchi Onye Nchụaja nke Discord, dị ka e gosiri na foto a, onye ajuju ga-enye avatar Tome nke Order na Discord, nke na-agbanye PvP. Enwere onye ụkọchukwu nke nwere ike ịkpochasị, n'otu ebe a na-amabeghị ebe niile, ọtụtụ ndị egwuregwu rịọrọ maka enyemaka n'ịntanetị mgbe ha ghọtara egwu PvP nwere ike ịbụ. Ndị ọrụ nke Onye Nchụ aja nke Discord nwere okpokoro isi mmadụ na njedebe. [Foto dị n'aka nri]
Esemokwu dị n'etiti ndị egwuregwu na EQ na EQ-II bụ nke a haziri nke ọma n'ọtụtụ buru ibu gbasara ọha mmadụ atọ ndị otu chi dị mma, nke na-anọpụ iche, na nke ajọ mmụọ nọchitere anya ya. Mkpakọrịta bụ isi na obere guild afọ ofufo nke ndị egwuregwu ahụ chịkọtara n'onwe ha, ìgwè ndị na-anọgidesi ike na ndị isi iwu mana ọ bụghị usoro nkọwa dị mgbagwoju anya nke nwere ike ịtachi obi ruo ọtụtụ afọ. Na mbido akụkọ ihe mere eme nke EQ, Robert B. Marks (2003: 102-04) mụrụ ha wee tụọ aro na ọtụtụ ụdị amalitela, na-eje ozi dị iche iche maka ndị egwuregwu nwere ụkpụrụ dị iche iche:
Ildtù ndị nkịtị: Otu dị iche iche nke ndị nwere obi ụtọ na-egwuri egwu, ndị nwere otu ihe, ma na-achọkarị ndị bụ ezigbo ndị enyi.
Idinggba ọsọ na-agba ọsọ: Ebumnuche zuru ezu, ndị a bụ ìgwè ndị na-achọ ọnọdụ na echiche nke imezu site na mmeri ọtụtụ nnukwu anụ ma mechaa quests ọnụ.
Gutù egwuregwu na-egwu egwuregwu: Ndị a na-elekwasị anya na mkparịta ụka na omume kama ịkọ egwuregwu-egwu, ụfọdụ n'ime ha ọbụna na-eme ihe nkiri n'ụdị.
Ndị na-egbu egbu: N'ọnọdụ PvP, ndị egwuregwu na-arụ ọrụ nke ndị omekome na ndị ogbu mmadụ, ma ọ bụ karịa na-achọ mmetụta nke ike site na igbu ndị egwuregwu nke ndị ọzọ.
N'April 2009, akwụkwọ mgbasa ozi n'ịntanetị Egwuregwu Egwuregwu bipụtara akụkọ ọdịnala nke isiokwu ndị ọkà mmụta banyere EverQuest. N'ịtụle ọnọdụ normative site n'echiche nkịtị, Greg Lastowka (2009) kwuru usoro iwu atọ dị iche iche. Nke mbu, ụlọ ọrụ nke kere ya nwere ọgụgụ isi, si otú a na-achịkwa ụfọdụ ụdị omume na-abụghị nke ụwa, dị ka ịchụ nta azụmahịa, na inye ụlọ ọrụ ikike ịtọ iwu maka omume egwuregwu. Nke abuo, a na-ewu ọtụtụ iwu na ngwanrọ nke egwuregwu ahụ, nke ụlọ ọrụ haziri ma nwee ike gbanwee, dị ka usoro na-achịkwa ọrụ nke Tome of Order na Discord. Nke atọ, ndị egwuregwu ahụ n'onwe ha nwere ike ịtọ ntọala, dịka ọmụmaatụ na-achịkwa omume nke ndị otu òtù, ndị ndị isi nwere ike ịchụpụ ma ọ bụrụ na ha emebi iwu.
Na onyinye ya na akwụkwọ akụkọ ahụ, Nick Yee (2009) kọwara etu e siri chepụta ngwa sọftụwia ahụ iji gbaa mbọ ka e nwee ọbụbụenyi na otu ga-anagide: mgbe ha chọchara ọganiihu ole na ole, ha ga-ahụ ụgụrụ. ”
Njirimara ziri ezi nke otu avatar nwere ike gbanwee, na-abụkarị n'oge mmụba mmeba, na-enwe mmetụta maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke nwere ike ịbụ obere ma ọ bụ nnukwu. Dịka ọmụmaatụ, mgbe EverQuest nke Abụọ malitere na 2004, o nwere obere mgbaaka druid ole na ole, nke yiri Stonehenge [Foto dị n'aka nri] mana kesaa n'ụzọ dị anya. Otu avatar nke klas druid nwere ike iji otu mee njem ozugbo na otu n'ime ndị ọzọ, uru dị mkpa na-atụle mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụ na ụba, na ebumnuche dị oke mkpa. Na 2010, agbanwere iwu iji kwe ka klasị ọ bụla jiri mgbanaka druid dị ka ọkara nke njem.
Mgbe mbubreyo Greg Lastowka akpọ ya isiokwu 2009 banyere EverQuest usoro iwu “Planes of Power,” ọ kọwagharị okwu amaokwu dị na subculture EQ. Planesgbọ elu ndị dị na EQ bụ mpaghara mebere iche na Norrath ma si otú a na-agbaso iwu dị iche iche, gụnyere ụgbọ elu nke ihe ọmụma nke nwere ọtụtụ mgbaaka druid, nke egosipụtara dị ka ihe ncheta nkume dị ala, nke na-enye ohere ịnweta ụgbọ elu ndị ọzọ na mpaghara Norrath na Luclin. E webatara usoro a na mgbasa ozi 2002 EQ nke akpọrọ n'ụzọ nkịtị "Planes of Power," ma chọọ ka ndị ọrụ ọkpụkpọ egwu mee ihe maka idebe ọhụụ na iwu ọhụrụ nke ndị na-emepụta egwuregwu dị ike nyere. Dị ka Wikipedia na-akọwa:
Ebumnuche bụ isi, ma ọ bụ ọchịchọ njedebe, nke Planes of Power bụ ịnweta Plagbọ nke Oge. Enwere ike ịnweta ụgbọ elu a naanị site na imeri chi ndị mbụ ma ọ bụ avatars dị ka: Fennin Ro, Council Rathe, Coirnav na Xegony. Iji nweta mpaghara niile nke mgbasa ahụ ma banye na Plane nke Oge, ndị egwuregwu ahụ chọrọ iji mezue ọkọlọtọ 28 nke ụdị ihe niile, metụtara ọnwụ nke chi chi ụgha na ihe okike. Enwere ike ịmechaa ihe ndị a site na mbọ a haziri ahazi nke ndị egwuregwu 72 na-arụkọ ọrụ n'otu oge.
Ọtụtụ mmeba ndị ọzọ ulatedomiri mgbanwe mgbanwe a, chọrọ mgbalị nke ọtụtụ ndị egwuregwu, gụnyere 2018 EverQuest nke Abụọ mgbasawanye, “Ọgba aghara na-agbadata.”
Ihe ịma aka bụ isi maka EverQuest akụkọ ifo agbapụwo n'ụzọ ihe atụ ka chi ọjọọ na-abanye n'ụwa, ezigbo chi na-apụ, okpukpe adịkwaghị n'ịdị n'otu na izi ezi. Mbipụta mgbasa ozi nke February 21, 2006 nke Sony kwalitere mmụba n'okwu ndị nwere ike ịbawanye uru taa:
Chi dị iche iche alọghachila ma ụwa mmadụ na-agbanwe na mmetụta ha. Mana onodu ohuru na-ejeghari n’etiti chi nile, ikike ojoo nke eweputara n’ime chi nke ndi mmadu. N'etinyeghị iwu nke pantheon, ọ na-ahapụ nrụrụ aka n'oge ya ma yie egwu ime ka pantheon niile na-ada ada. Nanị olileanya maka Norrath na-adabere ná ndị mmadụ nke butere ọgba aghara a. ”
Mana ndị mmadụ ahụ - ya bụ ndị isi ụlọ ọrụ Sony - kpebiri ka chi na-agbanwe agbanwe ịhapụ Norrath. Ha gbanyere EQ, EQ-II na di na nwunye ndị ọzọ dịka Companylọ Ọrụ Egwuregwu Daybreak na 2015, kemgbe ahụkwa, a hụbeghị nlanarị ha. N'ebe dị oke egwu, enweghị ego itinye ego na ya EverQuest Ọzọ debere ibu arọ nlanarị na ụwa abụọ ugbu a kama ịbụ nke ochie na nke mgbagwoju anya nke na-adọta ndị egwuregwu ole na ole iji kwado mbugharị dị ịrịba ama.
Foto #1: An EverQuest nke Abụọ avatar na-akwadebe iji ebe ịchụàjà nye chi Brell Serilis, na-achụrụ ma jiri ihu ọma chi nweta anwansi anwansi.
Foto # 2: Otu avatar na-eleta Templelọ Nsọ nke Solusek Ro na nke mbụ EverQuest, nke ndị ọrụ temple abụọ na-abụghị ọkpụkpọ gbara n'akụkụ.
Foto # 3: Onye nchụ aja nke esemokwu na ụgbọ nke ihe ọmụma nke EverQuest, bụ ebe bụ́ isi isi nweta amamihe.
Foto #4: An EverQuest nke Abụọ mgbanaka druid, na mpaghara Enchanted Lands, nke eji eme njem ogologo anwansi.
Bainbridge, William Folwell. 1883. Inye Onwe Onwe: Akụkọ nke Ọrụ Ndị Kraịst. Boston: D. Lothrup.
Bainbridge, William Sims. 2018. "Surreal impersonation." Pp. 65-80 n'ime Zọ maka ịmụ egwuregwu vidio na okpukperechi, nke Vit Sisler, Kerstin Radde-Antweiler na Xenia Zeiler dere. New York: Ntughari.
Bainbridge, William Sims. 2013. eGods: Faith Vus Fantasy in Computer Gaming. New York: Oxford University Press.
Bainbridge, William Sims. 2010. Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Online. San Rafael, CA: Morgan na Claypool.
Burt, Ronald S. 2012. "Network-metụtara mmadụ na Agency Ajụjụ: Multirole egosi na a Virtual World." American Journal of Sociology 118: 543-91.
EQ2. "Chi (EQ2)." Nweta site na http://eq2.zam.com/wiki/Deities_%28EQ2%29 na 30 September 2019.
Everquest Fandom weebụsaịtị. nd Nweta site na https://everquest.fandom.com/wiki/EverQuest_Wiki na 1 October 2019.
Everquest Lore na ebe nrụọrụ weebụ. nd Nweta site na https://everquestlore.fandom.com/wiki/Main_Page na 1 October 2019.
Oge niile II. "Player Klas." Nweta site na https://www.everquest2.com/classes na 30 September 2019.
EverQuest Lore Wiki. "EQGods." Nweta site na https://everquestlore.fandom.com/wiki/EQGods na 30 September 2019.
Gygax, Gary. 1979. Advanced Dungeons na Dragons, Dungeon Nna-ukwu Nduzi. New York: Rlọ TSR / Random.
Huh, Searle, na Dmitri Williams. 2010. "Dude dị ka Nwanyị: Gender Swapping in Online Games." Pp. 161-74 na Worlds Online: Ngbanwe nke Real na Virtual, nke William Sims Bainbridge dere. Guildford, Surrey, England: Mmiri.
Lastowka, Greg. 2009. "Planes of Power: EverQuest dị ka Ederede, Egwuregwu na Obodo." Egwuregwu Egwuregwu 9. Nweta site na http://gamestudies.org/0901/articles/lastowka na 30 September 2019.
Akara, Robert B. 2003. EverQuest Companion: N'ime Ime nke Gameworld. New York: McGraw-Hill.
Moreno, Jacob. 1944. "Psychodrama na Therapeutic Motion Foto" Sociometry 7: 230-44.
The EverQuest Wiki. “Chi.” Nweta site na https://everquest.fandom.com/wiki/Deities na 30 September 2019.
Wikipedia. "EverQuest." Nweta site na https://en.wikipedia.org/wiki/EverQuest na 30 September 2019.
Williams, Dmitri, Tracy LM Kennedy na Robert J. Moore. 2011. "N'azụ Avatar: Patkpụrụ, Omume, na Ọrụ nke Playgba Egwuregwu na MMO." Egwuregwu na Omenala 6: 171-200.
Ee, Nick. 2009. "Enyi na enyi Ogres na Wood-Elves: Mmekọrịta Formation na The Social Architecture nke Norrath." Egwuregwu Egwuregwu 9. Nweta site na http://gamestudies.org/0901/articles/yee na 30 September 2019.